Ny Semalt Expert dia manome fanandramana mahatsikaiky amin'ny Internet
Mozda dia fitaovana avo lenta rindrambaiko manangona fampahalalana mahakasika ny Internet. Mozenda tranonkalan'ny tranonkala duplicate ny hetsik'ireo surf-n'ny Internet mba hahazoana vaovao manokana avy amin'ny tranonkala. Ny fanesoana dia natao hananganana angon-drakitra tsy voaaro amin'ny aterineto ary manangona ny angon-drakitra amin'ny endrika azo vakina.
Mozonda Software Performance
Raha toa ka miparitaka ny tranonkala dia azo antoka sy azo itokisana ny lohahevitra roa tokony hodinihina - attrezzature palestra usate sicilia. Taloha, ny fanamboarana angona avy amin'ny tranokala dia tsy azo antoka sy sarobidy. Ny fomba fijery voalohany amin'ny famoahana ireo vaovao manan-danja avy amin'ny tranonkala dia nanoratra fananganana programa manokana izay niasa tamin'ny famongorana ireo angon-drakitra avy amin'ny lahatsoratra HTML lehibe amin'ny pejy Internet.
Tamin'ny taona 2007 dia niova ny teknolojia taorinan'ny fampisehoana rehefa nampiditra programa iray ho an'ny fandikana rakitra avy amin'ny tranonkala tsy misy fandaharana. Ny fandaharan'asa dia afaka mamantatra lahatsoratra manintona amin'ny pejy Internet amin'ny alàlan'ny laharan'ny lahatahiry sy ny adiresy mailaka. Nanomboka teo, dia nihatsara ny traikefa tamin'ny fanasitranana, rehefa nandeha ny fotoana.
Ny angon-drakitra betsaka dia hita amin'ny Internet ho ampiasaina amin'ny fampivoarana paikady ara-barotra sy tanjona fampiroboroboana. Na izany aza, ny fampahalalana dia hita amin'ny endrika tsy mifanaraka amin'ny fepetra momba ny rafitra. Ao no misy an'i Mozenda. Ny fampihenana ny angona avy amin'ny tranonkala mampiasa Mozenda dia mahasalama raha manomboka ny milina.
Nahoana no mamonona an'i Mozenda?
Ny tranonkala Mozenda dia mampivadika mora foana ny angona azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fandraharahana ara-barotra amin'ny alàlan'ny fanangonana ny angona azo ampiasaina amin'ny format azo ampiasaina. Mozenda dia tsy isalasalàna fa ny mpangalatra indrindra ao amin'ny tranokala. Ny fitaovana dia iray amin'ireo karazany. Tahaka ny browser-nao, Mozenda dia mampiasa ny interface user-friendly interface. Raha te hisintona ny angona avy amin'ny tranonkala ianao, mamintina fotsiny ny lahatsoratra lasibatra, ary mametraha ny sisa amin'ny Mozenda.
Ny faharetan'ny hafanam-pandindona ihany koa dia fepetra amin'ny alàlan'ny tranonkala. Miaraka amin'i Mozenda, afaka manangona angon-drakitra avy amin'ny tranonkala amin'ny fotoana voatondro ianao, tsy misy faneriterena amin'ny fandefasana fitaovana. Tsy programmer iray, tsy misy toerana ahiahy. Ny tranonkala Mozenda dia manolotra karazam-pandrefesana toy ny FTP, DOM, XPath, RegEx, ary API.
Raha nandinika mpikaroka an-jatony an-jatony ianao mba handraketana ny angon-drakitra isan'andro, dia mila manova ny drafitrao ianao. Miaraka amin'i Mozenda, tsy mila mpanamboatra programa ianao hananganana vahaolana maimaim-poana amin'ny tranonkala. Mozenda dia manana ny asan'ny tranonkalanao rehetra. Daty betsaka no miandry anao amin'ny Internet.
Ny tombotsoan'ny fametrahana ny tranonkalan'i Mozenda eo amin'ny milina
aorian'ny fametrahana Mozenda ao amin'ny solosainao, tsy mila mpiasa an'arivony ianao hanamarina ny fandoroana fako. Ny isan'ny mpiasa dia latsaka ny 2. Rehefa misafidy an'i Mozenda ianao, dia manaiky ny hiasa an-tanana miaraka amin'ny ekipa mpanolo-tena voatokana sy manolo-tena. Raha miatrika fanamby ianao rehefa miala amin'ny vohikala, dia ampahafantaro ny ekipa mpanohana an'i Mozenda ho fanampiana.
Ny ekipa mpanohana an'i Mozenda dia manolotra serivisy amin'ny fivoriam-be ary ny fivoriana fanofanana maimaim-poana ho an'ny mpanaraka. Ataovy ny fanapahan-kevitra momba ny raharahambarotra ary avereno jerena ny tetikasan'ny tetikasanao. Azonao atao ny manaparitaka ny angon-drakitra marina amin'ny tranokala Mozenda izay alefa maimaim-poana amin'ny aterineto.